Tilmaamaha ugu fiican iyo xeeladaha Sic Bo - Gambling Papa
1 Waa maxay Sic Bo?
2 Sidee loo ciyaaraa Sic Bo?
3 Waa maxay jaantusyada istiraatiijiyadeed ee Sic Bo?
4 Sic Bo hage loogu talagalay bilowga
5 Xeeladaha sharadka ee Sic Bo
6 Sidee loogu guuleystaa Sic Bo?
7 Sic Bo talooyin iyo tabaha
Haddii aadan maqal wax ku saabsan ciyaartan qaaska ah, markaa waxaad ku biiri kartaa dad tiro badan oo hadda uun bilaabaya inay fiiro gaar ah u yeeshaan. Ilaa iyo inta aad ka warqabto cilladda cilmiga, waa wax aad si fudud wax uga beddeli karto. Dhamaadka tilmaan-bixiyahan, waxaa si buuxda lagugu wargalin doonaa nooca hawsha. Habkaas, markii aad aragto tan xigta, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad ka qaybqaadato ficilka.
Ciyaar aan sinnayn oo fursad ah:
Dhexdhexaad ahaan, kani waa ciyaar nasiib oo aan dan ka lahayn sinnaanta. Maaddaama khilaafku aanu sinnayn, waxaa suurtagal ah in loo isticmaalo isbeddellada si aad uga faa’iideysato. Sababtaas darteed, ciyaartoy badan ayaa xiiso gelisay rajada ay umuuqato inay bixiso.
Ku ciyaarida xeelado kaa caawin kara inaad badiso badanaa:
Adoo adeegsanaya qaab istiraatiiji ah, waxaad sare u qaadeysaa suurtagalnimada inaad macaash ku baxdo. Isku soo wada duuboo, dadka badankood uma yimaadaan khamaarka si ay u lumiyaan shaatigooda. Xaqiiqdii, waayo-aragnimadii hore, waxay umuuqataa in dadka intooda badani jeclaan lahaayeen inay sagxadda ku xaaqdaan guriga. Mararka qaar, ciyaar sidan oo kale ah, taasi waa suurtagal dhab ah.
Bilowgii, waxaan diyaar u nahay inaan caawinno:
Markaad dib u eegayso waxyaabaha khadka tooska ah, waxaa muhiim ah inaad hubiso ilahaaga. Maaddaama ay jiraan warbixino badan oo iska hor imanaya, way adag tahay in lagu dhex dabbaasho iyada oo aan shaki laga qabin maskaxdaada. Dabcan, annaga oo nala joogna, waxaad heshay sumcad nagu qaadatay sannado in aan dhisno. Sidaa darteed, waxaan had iyo jeer ku siin doonnaa macluumaadka ugu kalsoon ee suurtogalka ah. Habkaas, waxaad heshay meel aad ku kalsoon tahay markaad u baahan tahay inaad wax ka barato khamaarka.
Maanta, dad ka badan sidii hore ayaa ciyaaraya ciyaartan:
Ilaa iyo inta cayaartani ka hadleyso, waa ka caan baxday maanta sidii hore. Guud ahaan marka la hadlayo, badankood waxay isku raacsan yihiin inay ka dhalatay helitaanka sii kordhaya. Waad ku mahadsan tahay baahsanaanta waaberi ee helitaanka internetka, waxaa jira tiro siyaabo cusub oo dadku ku ciyaari karaan. Iyada oo siyaabo badan oo aad ugu biiri karto baashaalka, layaab malahan sababta tirada intaa leeg ee dadka cusubi u buuxsamayaan irdaha.
Waa maxay Sic Bo?
Waqtigan xaadirka ah, waxaan u maleyneynaa inaad jeclaan laheyd inaad ogaato waxa ciyaartan ku saabsan tahay. Dabcan, waa hal shay in laga aqoonsado magaceeda hal habeen ka mid ah casino sannado ka hor. Si kastaba ha noqotee, waa wax gebi ahaanba ka duwan sidii loo fahmi lahaa sida ciyaarta loo ciyaaro. Sababtoo ah, markaad taas fahamto, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad miiska fadhiisato isla marka ay fursaddu is muujiso.
Asal ahaan Shiinaha hore:
In kasta oo asalkiisa saxda ah la isku haysto, haddana waxa la isku raacsan yahay ayaa u muuqda inuu muujinayo in Shiinaha uu ahaa meeshii laga helay markii ugu horreysay. Dhulkaas qadiimiga ah, dadku waxay bilaabeen inay ciyaaraan ciyaar nasiib oo ku lug lahayd saddex laadh. Waqti ka dib, ciyaartaasi waxay isu beddeshay nooca casriga ah, oo aan sii wadno inaan sii ciyaarno illaa maantadan.
Lagu ciyaaray seddex laadhuubo:
Iyada oo seddex laad ah garoonka dhexdiisa, waxaa jira xitaa fursado ka badan inta ay lahaan laheyd ciyaaro badan oo caan ah sida craps. Xaaladdaas oo kale, waa inaad dhigeysaa khamaarkaaga natiijada kaliya laba laadh. Munaasabaddan, waxaad mid kale ku dari doontaa isku darka. Sidaa darteed, tirada suurtagalka ayaa si xad dhaaf ah u kordheysa, taas oo ay ugu wacan tahay ku darista lama filaanka ah.
Dhowr nooc oo kala duwan oo laga ciyaaray adduunka oo dhan:
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la aqoonsado in dhowr kala duwanaansho kala duwan oo ciyaartan ah ay jiraan. Guud ahaan marka laga hadlayo, nooc isku mid ah ayaa loo adeegsadaa dhammaan casinos-yada Mareykanka ama casinos online . Weli, maahan wax la maqlo dadka inay la kulmaan wax yar oo ka mid ah farqiga qalaad ee u dhexeeya safarada dibadda. Haddii aad ku xisaabtami karto dadkaas, waxaan jeclaan lahayn inaan kugu ammaano. Ma aha oo kaliya inaad taqaanid ciyaar la yaab leh sida tan, laakiin sidoo kale si wanaagsan ayaad u safartay.
Tarjumaadda dhabta ah ee magaca macnaheedu waa “laadhuu qaali ah”:
Sida iska cad, magaca ciyaartan ayaa ah Anglicization ee magaceeda Shiinaha. Luqadeeda asalka ah, waxay u tarjumi laheyd ereyada laadhuu qaali ah macno ahaan. Waxay u muuqan doontaa magac ku habboon haddii aad na weydiiso.
Sidee loo ciyaaraa Sic Bo?
Weligaa fursad ma u heshay inaad ku ciyaartid ciyaarta ciyaarta intaad ku jirtay casino hore? Hadday sidaas tahay, waxaad ka heli doontaa ciyaartan mid la yaab leh oo la mid ah. Intooda badan, dadku waxay umuuqdaan inay helayaan kudhimasho dheeri ah si loogu daro inyar oo udgoon dhadhanka. Mararka badankood, waxaa lagugu adkeyn lahaa inaad sharraxdo sida kulankaan uga duwan yahay casiraadyada adigoon tixraacin dhimashada. Hoos, waxaan ku sharaxnay socodka guud ee sida ciyaartu u ciyaarto. Markaad baratid waxyaabaha soo socda, iskuma arki doontid biyo qariib ah. Markaad diyaar u tahay inaad sameyso sharad, waad iska boodi kartaa adiga oo aan welwel lahayn.
Si aad u gasho sharad, waxaad dhigaysaa jajabkaaga qaybta u dhiganta miiska:
Si la mid ah ciyaarta ciyaarta ciyaarta, Markaad dhigatid sharadkaaga, waxaad tilmaamaysaa waxaad sharadayso adigoo dul dhigaya qayb gaar ah oo miiska ka mid ah. Waxay kuxirantahay halka jajabku fadhiyo, waxaad ku sharxi doontaa natiijada gaarka ah ee dhimashada. Ka dib markuu ganacsaduhu iska daayo iyaga, waxaa lagu abaalmarin doonaa haddii aad si sax ah u samaysay wicitaanka.
Intaas ka dib, waxaad arki doontaa ganacsadaha oo soo qaadaya laab yar oo ay ku jirto dadka dhinta:
Kaba soo qaad inaad sharadkaaga ku sameyso waqtigeeda, waxaad ku soo gelaysaa roster a coaster markii aad aragto ganacsadaha oo lafta laadhuuga iska fogeeya. Waqtigaas, waa waqtigii ficilku bilaabmi lahaa.
Markaa, waxay xirayaan laabta iyagoo ruxaya:
Ka dib markii ay ku jirto laadhuuga, ganacsaduhu wuxuu bilaabi doonaa inuu si xun u ruxo weelka. Nidaamkani wuxuu soconayaa xoogaa daqiiqado ah illaa waqti ku filan laga gudbo. Halkaa marka ay marayso, isagu miiska ayuu u muujin doonaa waxyaabaha ku jira.
Marka waqti ku filan ka idlaado, ganacsadaha ayaa furaya sanduuqa si uu u muujiyo dhimashada:
Ka dib ruxitaanka laadhuuga muddo dheer oo ku filan, qof kasta oo miiska fadhiya waxay fursad u helayaan inay arkaan. Xusuusnow, waa muhiim inaadan ku deg degin ganacsadaha. Haddii aad sameyso, waxay u qaadan karaan dambi anshaxa noocaas ah. Si kastaba ha noqotee, inta badan khibradaheenna, ganacsatadu waxay u muuqdaan kuwo si dhakhso leh ula shaqeynaya shaqadooda.
Ha iloobin inaad dhigto sharadkaaga waqtiga ku habboon:
Dabcan, dhaqso badankood ayaa waliba kaa hor imaan kara haddii aad dhacdo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Xaaladdaas oo kale, waxaa laga yaabaa inaadan miisaska miiska saarin miisaska si dhakhso leh ugu habboon iyaga si ay ugu qalmaan wareeggaas. Nasiib darrose, haddii tani kugu dhacdo, markaa wax badan oo aad qaban karto oo aan ka ahayn sugitaanka ma jiraan. Ka sokow, sidee ugu wanaagsan ee loo heli karaa in wax laga barto muhiimadda ay leedahay in la dhigto waxyaabahaaga khamaariga ah inta ka horreysa waqtigaan?
Sidoo kale, hubi wixii khamaaris ah ee la geliyo inay ku jiraan ugu yaraan iyo ugu badnaan xadka miiska:
Mar labaad, waxaan jeclaan lahayn inaan xoojino sida ay muhiimka u tahay in sharadkaaga la dhigo waqtigiisa. Meelaha qaarkood, ganacsatadu si naxariis leh ugama qaadan doonaan sharad aan waqtigooda la gaadhin. Haddii ay dhacdo inaad miiska dul dhigto waqtiga loo qabtay ka dib, ma aha wax aan la maqli karin inay iyagu weydiistaan ​​miiska inuu banneeyo.
Waa maxay jaantusyada istiraatiijiyadeed ee Sic Bo?
Waqtiga intiisa badan, bilowgu waa inay lugeeyaan iyagoo aan wax tilmaam ah helin. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaadan waligaa ciyaarin kulankaan. Sideed ku ogaan doontaa waxa ku dhici kara sharad kasta haddii ay taasi dhacdo? Anaga ahaan, waxay umuuqataa mid iska cad inay tani tahay xaalad aan laqiyaasi karin. Sababtaas awgeed, waxaan marwalba kugula talineynaa kuwa bilowga ah inay daabacaan jaantusyo istiraatiijiyadeed oo yar si ay ula socdaan inta ay u safrayaan qamaarka.
Khamaarista kaladuwan waxay leeyihiin kala duwanaansho kala duwan:
Iskusoo wada duuboo, udhaxeynta natiijo kasta waxay ka mid tahay fikradaha ugu muhiimsan ee aad ku xafideyso. Maaddaama kuwan ay go’aaminayaan cabbirka lacag bixin kasta, waxaad u baahan doontaa inaad u isticmaasho macluumaadkaas ka hor wareeg kasta. Haddii kale, si dhib leh ayaad u ogaan doontaa inta aad filan karto haddii aad dhacdo inaad wacdo wicitaan wanaagsan.
Fursadahaaga bixinta waxay ku kala duwanaan doonaan iyadoo kuxiran fursadaha sharadka ee taagan:
Markaad barato fursadaha ciyaar kasta, waxaad ku qalabaysan doontaa macluumaad muhiim ah markaad ka fikirayso mustaqbalka ciyaarta. Marka la barbardhigo cayaaraha kale, waxaad yeelan doontaa waxyaabo badan oo aad falanqeynayso kahor intaan wareeg walba bilaabmin. Maaddaama ay jiraan saddex laadhuu, waxay umuuqan kartaa sidii inay ka dhib badnaayeen cayaaraha kale ee casino. Si kastaba ha noqotee, markaad kobciso khibraddaada, waxaad u bogi doontaa isku-darka dheeri ah.
Parlay guuleysigaada xitaa abaalmarino waaweyn:
Aynu u malayno in riwaayadaha ugu horreeya ee ciyaaruhu ay doorbidaan adiga. Intaa ka dib, waa inaad isku uruurisay xidhmooyin yar yar oo qadaadiic ah. Kuwaas, waa inaad ka faa’iideysataa qiimahooda si ay kaaga sarreeyaan dadka intiisa kale. Adiga oo adeegsanaya guulahaagii hore, cabbirka sharadkaagu wuu sii socon karaa markuu sii socdo. Ugu dambeyntii, adoo si wax ku ool ah u maareeya ciyaar kasta, cabirka stash-kaaga ayaa bilaabi doona inuu si aad ah u koco.
Ka hortagga khalkhalka iyadoo la hirgelinayo adeegsiga deyrar istiraatiiji ah:
Waqtiga qaarkood, waa inaad tixgelisaa sida aad uga jawaabi lahayd markasta oo ay wax walba kaa soo hor jeestaan. Marka ay timaado khamaarka, qof walba maalintiisa iftiinka ayuu ku jiraa. Si kastaba ha noqotee, isku mid ayaa laga dhihi karaa khibradda ka soo horjeedka sidoo kale. Hadaad jeceshahay inaad ilaaliso guulahaaga, markaa waa inaad barataa sida loo dhigo sharad istiraatiiji ah sidii xayndaab looga hortago khasaaraha.
Sic Bo hage loogu talagalay bilowga
Sida kulamada kale badankood, marka ugu horaysa ee aad bilawdo ciyaartan, waxaad dareemi doontaa inay jiraan waxyaabo badan oo aad baran karto. Dabcan, waxay leedahay dhowr lakab oo dheeri ah oo kakanaanta marka la barbardhigo ciyaaraha kale ee fursadda. Hase yeeshee, wakhti yar oo maalgashi ah, waxaad ku guuleysan doontaa dhammaan buug-yaraha fikradaha. Dhamaadka howshaas, way kuu fududaan doontaa inaad miiska hoos u tuurto.
Haddii aad jeclaan lahayd caqabadaha ugu waaweyn ee guuleysiga, waxaad u baahan doontaa inaad doorato mid ka mid ah sharadyada ugu badan:
Xusuusnow, sharad kasta oo aad sameysid, kala duwanaanshaha laadhuuga ee ciyaartaas waxay ku xirnaan doontaa waxyaabaha gaarka ah. Qeybta ugu badan, bixinta weyn ee loogu talagalay sharad gaar ah, ayay u yar tahay inay laadhuhu muujiyaan wejiyadaas. Sidaa darteed, haddii aad jeceshahay inaad sare u qaaddo fursadahaaga inaad gasho sharad guuleysan, waa inaad doorataa sharadyo lacag-bixinno yaryar ah.
Caadi ahaan, ciyaartoydu waxay sharad ku geli doonaan booska weyn haddii aysan dareemin nasiib gaar ah:
Iskusoo wada duuboo, waxaa ku yaal miiska miiska loo yaqaan weyn. Meeshan, waxaad ku dhejin kartaa jajabkaaga si aad u siiso heer cayiman oo ilaalin ah. Mararka badankood, waxaad heli doontaa kudhowaad 50% tallaal ah inaad sameyso wicitaan sax ah adoo ku dhejinaya jajabyada halkaas. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah waxaa jira suurtogalnimo aad u sarreeya oo guuleysi ah, bixinta ma ahan mid aad u sarreeya sidii ay ahaan lahayd haddii uu wicitaan kale ku guuleysan lahaa.
Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in aad Chips-kaaga dhigto barta yar:
Dhinaca kale, ciyaartoyda qaar waxay doorbidaan inay dhigaan sharadooda booska yar. Si la mid ah barta weyn, barta yar ayaa leh qaddarin ka sarreysa inta badan wicitaannada kale ee aad dhigan karto. Isku ekaansho kale oo u dhexeeya labadan ayaa noqon doonta cabbirka lacag-bixinadooda. Labadoodaba, waxaad filan kartaa fursad aad u sarreeya oo guusha. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale labaduba ka mid yihiin kuwa ugu mushaharka yar ee aad ku sameyn kartid ciyaartan.
Meel kasta oo kale waxay leedahay hoos u dhac aad u hooseeya oo dhaca:
Hadda, haddii aad jeclaan lahayd inaad si weyn u weynaato, markaa waxaad u baahan doontaa inaad dhigto khamaarkaaga meel kale. Meelaha kale ee miiska saaran, waxaad ka heli doontaa sharadyo ku tartamaya natiijooyinka gaarka ah ee dhimashada. Guud ahaan marka laga hadlayo, dhammaan dhibcahaani aad ayey ugu yar yihiin inay dhacaan. Hase yeeshe, maadaama loo arko si aad u yar, haddii aad dhacdo inaad ku deyso dusha si guul leh, bixinta waxay noqon kartaa mid aad u ballaaran.
Xeeladaha sharadka ee Sic Bo
Ugu dambeyntiina, markay tahay khamaarka, waxay u egtahay inay ahaato khibrad shaqsiyeed. Markasta oo ay timaado waxyaalahan oo kale, marwalba waa inaan ku dadaalnaa sida ugu fiican ee aan u bixinno talo ballaadhan oo ku habboon. Haddii kale, waxaan halis ugu jirnaa inaan qayb ka dhigno qayb ka mid ah dhagaystayaasheena. Innaga, waligaa uma baahnid inaad ka walwasho waxyaabahaas kala qaybinta ah. Taabadalkeed, alaabtii ayaynu haysannay iyadoo aan riwaayad oo dhami jirin.
Miyaad doorbideysaa inaad noqoto qof han leh ama taxaddar badan ?:
Maadaama khamaaristu ay tahay mid shakhsiyadeed, waa inaad si fudud ugu jawaabtaa su’aalaha adiga kugu saabsan. Adoo baranaya inaad eegto gudaha, waxaad kaheli doontaa habka ugu haboon ee aad shaqaalayn karto markaad miiska fadhiisanayso. Qaabkaas, dhamaadka habeenka, waxaad dareemi doontaa xitaa sidii aad ka fiicnayd markii aad timid.
Khatar intee le’eg ayaad u dulqaadan kartaa ?:
Ilaa iyo inta laga hadlayo ciyaaraha jaaniska, dulqaadka halista wuxuu ka mid yahay astaamaha ugu caansan ee khamaarayaasha xirfadleyda ah. Si aad ugu dulqaadato halista, way ku caawinaysaa haddii aad dareento raaxo dhaqaale oo ka baxsan khamaarka. Mar alla markii aad yeelato dareen amni oo maaliyadeed, ma xuma in aad ku ciyaarto qaybta yar ee hantidaada. Weli, way ku caawin lahayd haddii aad xaddiddo inta lacag ee loo oggol yahay inay gasho khamaarka. Adiga oo uga tagaya inta kale guriga, waxaad kahortagi doontaa natiijooyinka ugu xun ee waligood dhaca. Waqti ka dib, markaad sii wadato barashada farshaxanka khamaarka, heerka halista ee aad dareento in loo dulqaadan karo ayaa is waafajin doonta.
Guud ahaan, xeelado noocee ah ayaad doorbideysaa ?:
Ka sokow, iyadoo xeelado badan la heli karo, waxaa jira in ka badan oo ku filan oo qof walba laga dooran karo. Kaba soo qaad inaad naftaada u tixgeliso inaad tahay khamaariiste dagaal badan. Hadday taasi sidaas dhacday, markaa way fiicnaan lahayd haddii aad u hesho xeelad ku habboon nooca shakhsiyaddaas. Dhinaca kale, haddii aad noqotay khamaariiste aad u taxaddar badan, markaa way fiicnaan lahayd haddii aad heshid qaab cabbir badan. Marka, helitaanka istiraatiijiyad ku habboon waxay kuxirantahay shakhsiyadda khamaarlaha su’aasha laga qabo inbadan oo inteena badan aan dooneyno inaan qirno.
Sidee loogu guuleystaa Sic Bo?
Dhammaan tartamada waa inay lahaadaan guuleyste mar ay u soo degto dhamaadka safka. Ilaa aad diyaar u ahaato inaad qirato tartanka, had iyo jeer waa muhiim inaad tixgeliso waxa ay ku qaadaneyso qofka inuu guuleysto. Habkaas, markaad naftaada ku dhex aragtid ficilka, waxaad ku kalsoonaan kartaa aqoonta dabiiciga ah ee aad soo baratay intaad nooshahay oo dhan.
Arrimaha qibrada u leh ayaa ka badan inta badan qirashada:
Iskusoo wada duuboo, waxay umuuqataa sida qodobka ugu muhiimsan ee guusha marka laga hadlayo khamaarka uu noqon lahaa heerka khibrada uu leeyahay khamaariiste. Maaddaama heerka khibradooda ay sii kordheyso, tayada qamaarka ay sameeyaan waxay kordhayaan waraaqaha. Marka, adoo sii kobcinaya khibradaada gaarka ah, waxaad dareemi doontaa inaad u fududahay inaad si sax ah go’aan u gaarto.
Si loo horumariyo ciyaarta, waxaan kugula talineynaa inaad ku tababarto ujeeddo:
Intaas waxaa sii dheer, si loo kordhiyo waqtigaaga waxqabadka, ku tababbarashada ujeedadu waa muhiim. Adigoon diiradda saarin halka ay iska leedahay, waxaad iska dhaafaysaa waqtiga adoo ku dadaalaya dadaalka ugu yar. Inta badan oo aad xooga saari karto waqtiga aad ku tababaraneyso, natiijooyinkaaga ayaa ka sii fiicnaan doona maadaama xoog dheeraad ah la maal galiyo.
Dabcan, maadaama ay ku tiirsan tahay qayb weyn oo ka mid ah fursad, waxaad waligaa awood u yeelan doontaa inaad ku horumariso heerkaas oo kale:
Si fudud loo qeexaa, jaanisku waa garqaadaha ugu dambeeya ee mar laadhuuga miiska saaran. Maaddaama ciyaarta ay ku tiirsan tahay nasiibka, waxaa jira wax badan oo aad sameyn kartid si aad u weyneyso fursadahaaga aad ugu socoto meel weyn casino jackpot Dhinaca kale, waxba kuu tari mayso inaad qirto guul darrada aan loo baahnayn. Ilaa iyo inta aad garaneyso xaddidaadkeeda, markaa ku daadinaysa dadaalkaaga horumarinta qaab noocaas ah micno ma leh.
Sic Bo talooyin iyo tabaha
Ugu dambeyntiina, ka hor intaanan ambabixin, waxaan helnay xeelado dhawr ah oo aad jeceshahay. Adoo baranaya sida loo isticmaalo, waad ka soo bixi kartaa shaarkaaga markii daqiiqad sax ah timaado. Halkaa marka ay marayso, ma noqonayso wax kale oo aan ahayn garasho hagaya go’aamada mindhicirkaaga. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego aragtida guriga, waxaad u xaaqaysaa miiska sida kuwa kale. Haddii taasi u muuqato mid rafcaan leh, markaa waxaan aaminsanahay in macluumaadka soo socdaa ay gabi ahaanba ahaan doonaan kuwo lagu farxo. Ilaa iyo inta aad diyaar u tahay inaad la kulanto jahooyin cusub, markaa ciyaartani waxay heshay wax ay ku siiso adiga oo aan cidina muraayad u helin.
Xusuusnow, dhigida sharadkaaga intaanu waqtiga xaddidan dhicin waa muhiim:
Maxaad rumaysan lahayd in khaladaadka ugu badan ee ay sameeyaan bilowgu ay noqon doonaan illaa inta cayaartani khusayso? Aragtidayada, jawaabtu waxay umuuqataa mid iska cad. Guud ahaan marka laga hadlayo, ciyaartoydu qaladaad ayey sameeyaan inta lagu jiro waqtiga loo ogol yahay inay meel dhigtaan sharad. Adiga oo sugaya muddo dheer ilaa ay dhigayaan xayawaankooda, markay ugu dambeyn go’aansadaan inay dhigaan, waxay jabinayaan sharciyada iyo xaqiiqda. Ilaa ganacsaduhu si gaar ah u dareemayo saaxiibtinimo, xuquuqdooda ayay ku jirtaa in ciyaartoydu miiska kala baxaan xilligaas. Weli, waqti dheer kuma qaadaneyso in la barto goorta la dhigayo. Markaad fahamto sharciyada meeleynta xayawaanka, waxaad ka fogaan doontaa ceebta ah inaad qaladka noocaas ah sameyso.
Khamaarista oo dhami ma wada laha fursadaha loo siman yahay ee guusha:
Tan ugu muhiimsani, markaad dhigatid sharadadaada, waa inaad ogaataa u-qalmitaanka khamaarkaas. Haddii kale, waxaad dhigeysaa lacagtaada adigoon aqoon u lahayn sida ay wax u qabaneyso. Haddii ay dhacdo inaan ku jirno kabahaas, markaa ma qaadan doonno waqtigaas annagoo aan si buuxda uga warqabin cawaaqibka. Si kale haddii loo dhigo, way fiicnaan lahayd haddii aad wakhti yar ku qaadan lahayd barashada xeerarka ciyaarta.
Maaddaama kala duwanaanshaha guuleysigu sii kordhayo, cabirka lacag-bixintu way isdhimaysaa iyadoo u dhiganta:
Si loo kordhiyo dakhligaaga, waxaad ubaahantahay inaad dhigto sharadyadaada meelaha leh lacagaha ugu badan. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan doontaa inaad qaadatid khatar ka badan inta aan lagama maarmaanka u ahayn.